27 Ngamana 2016
27. Meyi 2016 Oliver Bienkowski
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 27. Meyi 2016
I-PixelHELPER ixhasa ukuzimela kwe-Uighurs, eHong Kong, eTaiwan naseTibet
Am 29.07.2019/1/XNUMX sipapasha ividiyo ye-XNUMX yethu yesikhumbuzo sase-Uighur e #Marrakech, sabhala kuwo onke amaphephandaba ama-Arabhu ngento esiyenzileyo singakhange siphenduleke, kuphela emva kokuba sixelele amaphephandaba ukuba umqolo wokuqala wesikhumbuzo ngowama-gay amaJuda ilitye lesikhumbuzo njenge- "Holocaust Memorial of Marrakech" kwimbali yaseMorocan. Intiyo iphumelele ngokuchasene nobumbano kunye ne-Uighurs yamaSilamsi. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho lizwe lamaSilamsi emhlabeni elixhasa i-Uighurs ukuya kwinqanaba olifunayo. Ndiyathemba ukuba kwiminyaka eli-100 isikhumbuzo sokuqala sabantu base-Uighur Muslim Turkic siya kuba yinto eguqukayo kumanyano lwamazwe amaSilamsi ngeUighurs.
Ukuba amaTshayina achithe iicawe ezili-1000, ingqumbo eYurophu iya kuba ntle. Umlilo kwikati ye-cathedra unokutshisa ubumbano lwehlabathi apha. I-1000 yee-mosque kunye neecawa zobuKristu sele zitshatyalalisiwe e-China. Sinikezele zonke ii-Uyghurs ukuba zibakhe ngokwabo njengekopi eyiyo phesheya ukuze zidibanise ubumbano kubantu abacinezelweyo bamaSilamsi kwihlabathi liphela. Ngelishwa, uninzi lwee-Uyghur ziphila ngokubaleka okanye kwiinkampu zokufunda zaseTshayina kwaye ziindlala. Kungenxa yoko le nto simisela iGoFundme fundraiser. Kuxhomekeka ekubeni siqokelele kangakanani, sakha ithala leencwadi, i-mosque okanye ingcwaba.
I-China ichithe ngaphezulu kwe-3 yee-mosque, amangcwaba kunye neendawo zokugcina iimpahla kwiminyaka emi-1000. I-Beijing icwangcisa ngokucwangcisiweyo inkcubeko kunye nenkolo yama-Uighurs amaSilamsi. Imifanekiso yesatellite ibonisa umfanekiso owoyikisayo. I-PixelHELPER iya kumisela umzekelo kunye nokwakha ingcwaba le-Iman Asim elitshabalalisiweyo kwiintaba zeMoroccan ngeplani ekhumbuza intshabalalo yiTshayina. Ulwazi oluninzi malunga neprojekthi
Sifuna idemokhrasi e China. Kwaye amazwe angawakho e-Uyghur, eHong Kong, eTaiwan naseTibet. Iqela lamaKomanisi kufuneka lichithwe kwangoko. Ijuba lokuqikelela ukukhanya
Sifuna inkululeko yonqulo eChina, inhlonipho ngamalungelo oluntu kunye nokhetho lwentando yeninzi lwexesha elizayo. Zonke i-mosque kufuneka zakhiwe kwakhona ngexabiso le-China, bonke #Uiguren Kumele ukhululeke ukuba usebenzise ukholo lwakho.
Sifuna ukukhululwa ngokukhawuleza kwazo zonke iiUighurs kunye nokusungulwa
inkululeko yenkolo eChina. Nabani na ongakholelwa oko akufunayo, i-Flying Spaghetti Monster okanye enye yeenkolo zehlabathi. I-China kufuneka imise abemi bayo ukuba basebenzise inkululeko yonqulo. Umgaqo-siseko waseJamani unkululeko yenkolo-leyo kufuneka ithathe umgaqo-siseko waseTshayina njengomzekelo.
Iphulo lamaSilamsi eUighurs eTshayina / kumalungelo oluntu Meyi 6th, 2020Oliver Bienkowski
ofakwe: iTshayina, Uighurs, Uyghur